Idzo tsika dzakanakisa
Wongororo dzetsika zvinyorwa
Imba Yemafashoni, naJulia Kröhn
Sechikamu chekusimudzira kwenyaya iyi, zvinonzi kushungurudzika kwake kwakabata mumwe wevanyori vaitungamira ehunhu hwakazvarwa patsva muzana ramakore regumi nemapfumbamwe hunoshandira kuravira kwemuverengi wevanyengeri uye zvikonzero zvinokura zvakaita sevakadzi. Zvingave here kuti Anne Jacobs akadanana nebasa iri re ...
Vashanduki Edza Zvakare, naMauro Javier Cárdenas
Iyo inoverengeka inogona kushandiswa zvakakwana kusvika pakuziva chaiyo chaiyo mamiriro kana nyika yese. Rondedzero yekukurudzira uine chinangwa chekuswedera padyo nenzvimbo, inokupa iwe kuzviisa pasi kwekuti ndiani akagara munzvimbo iyoyo. Zvinogona kutaridza sekutenda kwechokwadi, asi kune zvakawanda zvakakosha mupfungwa. Pakupedzisira, …
Vazhinji, naTomás Arranz
Bhuku rinonakidza nekurima rinofanira kugara richitariswa zvakanyanya. Ndozvazviri mubhuku rino reVazhinji. Nechikepe ini munguva pfupi ndinouya nedudziro zhinji yemusoro wenyaya (nguva dzose kuzviisa pasi mushure mekuverenga kunogutsa). Nekuti zita racho rine zvarinoreva izvo zvichakurumidza kuve ...
Ihofisi yemadziva neminda, naDidier Decoin
Odyssey yemukadzi muzana ramakore rechiXNUMX Japan. Pfupiso yakasimba yenyaya ino yakapfupikiswa mumutsara wakareruka. Zvimwe zvese zvinouya mushure…. Didier Decoin akatora kunyorwa kwenyaya iyi zvakanyanya (sezvazvinofanira, hongu) Anopfuura makore gumi akazvitsaurira ...
Mhuri isina kukwana, naPepa Roma
Iyi nganonyorwa inopihwa zviri pamutemo kwatiri seyakavanzika yevakadzi. Asi ini zvechokwadi handibvumirani neiyo label. Kana ichitariswa nenzira iyoyo nekuti inotaura nezve iyo inogona kuita matriarchy iyo nhoroondo yaichengeta zvakavanzika zvemhuri chero ipi uye yakavanza nhamo dzemusuwo wekunze, hazvina musoro. Hapana …
Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa, naGabriel García Márquez
Kunyadzisa, mutemo usina kunyorwa, nhanho dzerunyararo, kuverenga, uye kurwadziwa pamusoro pekufirwa nemunhu waunoda. Munhu wese anoziva asi hapana anozvidza. Chete neshoko remuromo, kune avo vanoda kuteerera, chokwadi chinotaurwa nguva nenguva. Wese munhu aiziva kuti Santiago Nasar aizofa, kunze kwaSantiago pachake, uyo asingazive nezvechivi chekufa chaakaita pamberi pevamwe.
Iwe unogona ikozvino kutenga Chronicle yeRufu Rwakafanotaurwa, iyo yakasarudzika pfupi nhaurwa naGabriel García Márquez, apa:
Kunze pachena, naJesús Carrasco
Yakauya mumaoko angu sechipo kubva kushamwari yakanaka. Shamwari dzakanaka hadzimbokundikani mune yekunyora kurudziro, kunyangwe kana isiri kwazvo mumutsara wako wenguva dzose ... Mwana anotiza kubva kune chimwe chinhu, isu hatizive chaizvo kuti chii. Kunyangwe kutya kwake kupukunyuka kuenda kupi, iye anoziva kuti ane ...